Kana uri dijitari shanduko kubvunza yakasimba; semuenzaniso, iwe unogona kuzadza zvese zvese muspredishiti nekungotarisa tarisiro yako yazvino tarisiro uye kuzvimisikidza iwe kumatekisheni aunonyatsoziva nawo. Iwe unogona kutsvagisa mazwi akakosha uye woisa pfungwa dzako pane injini dzekutsvaga kune avo vashandisi vari kutsvaga dhijitari shanduko agency, dijitari zano wezano, Enterprise yekumisikidza yakasimba, Etc.
Kubatana & Kuwana Makambani - kupa kutsvagisa uye dzidzo kumafemu eM & A angave akanaka. Sezvo pavanobatana uye vachiwana vatengi, ivo vanozove nematambudziko ekuisa pakati yavo yezviitiko zvedigital.
Imwe yemeseji inoshungurudza kunzwa kubva kune mutengi ndeye, "Isu hatina kuziva kuti kambani yako yakapa izvo!" mushure mekunzwa nhau kuti vakasaina kondirakiti neimwe kambani.
Nhanho yakakosha mukukwiridzira mutengi wako kutaurirana zvese zvigadzirwa, masevhisi, uye nemikana mikana iyo bhizinesi rako rinogona kuvapa. Nekuti iwe unotove nehukama hwakasimbiswa nekambani, inogona kunge yatove kunyorwa mune avo accounting masisitimu ekubhadhara, atove akaisa mutsvuku zvibvumirano zvebasa rako ... zvinowanzo kuve nyore kuwedzera hukama hwauinahwo navo.
Kubatana nemamwe masangano aunovimba nawo kazhinji mukana wakanaka wekuvaka kukosha uye kutotyaira mari. Isu tinofambidzana nekubatana nemakambani mazhinji atinoziva uye kuvimba kuti tiitire basa redu rakakura vatengi vedu. Iri zano rekukunda kune vese vatengi vako uye yako wega kubuda kwemari.
Mushure mekupedza kuita kwedu nevatengi, ivo vanowanzo svikwa neanopa software kuti vataure pamisangano, kutora chikamu muhurukuro, uye kutaurwa mumabhizimusi zvinyorwa.
Sezvo ivo pavanowana iwo mikana, zvinongoitika kuti kambani yako ichataurwa mune mamiriro ezvinyorwa zvavari kupa. Nekuti ivo havasi kushanda nokuti iwe kana kubhadhara by iwe, ivo vari kutaura kune vateereri sechiremera uye mushandi anovimbwa naye. Rudzi irworwo rwekukurudzira kwevatengi ruchaendesa kunoshamisa kuziva nezve iro basa rauri kuita.